Home Wararka Dowlada Qatar oo deganaansho & degaan siisay qoyska RW Roble! Muxu ku...
Dowlada Qatar oo deganaansho & degaan siisay qoyska RW Roble! Muxu ku badashay?
Qoyska iyo ehelada ku dhashay Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa laga siiyay dalka Qatar gaar ahaan magalaada Doha Qasri weyn. Qasrigaan ayaa la dajiyay qoyska iyada oo loogu daray sharciga deganaanshaha ee aan waligiis dhicin. Qoyska Rooble ayaa bishii labaada si buuxda u degan magalaada Doha.
Qoyskaan ayaa waxa laga soo raray magaalada Nairobo ee dalka Kenya oo uu mudo 10 sano ka badan ay deganaayeen. Sida ay noo xaqjiyeen ilo muhim ah oo lagu kalsoon yahay, ma aha kaliya in qoyska Rooble la siiyay deganaansho iyo degaan ay degaan, laakiin waxaa loogu daray biil (kaalmo dhaqaale) joogta ah, gawaari loogu adeego qosykiisa iyo gawaarida raaxada.
Dad badan ayaa is weydiinaya maxuu ku badashaday Rooble in kaalmada noocaan ee xadidan la siiyo? Waxaa jira warar badan oo sheegaya in arintaan ay ka danbeeyeen labada dal ee Kenya iyo Qatar? Waxaa Rooble looga fadhiyaa in uu ummdda Soomaliyeed u sheego waxa uu ku badashay taageeradaas?.
Inta uu xilka qaban, RW Rooble ayaa aahaa shaqsi baahi dhaqaale oo xoogan ay haysay, waxaan muuqato in uu xiligaan uu ku jiro dhaqaale aruursi keeni kara in uu si dadban oo aan ku talagal ahaynin uu u beeciyo karaamada umadda Soomaaliya?